Trano fivarotana 7 VIP minivan - LUJO Madrid famindrana Airport Terminal Trano fivarotana 7 VIP minivan - LUJO Madrid famindrana Airport Terminal
Trano fivarotana 7 VIP minivan - LUJO Madrid
Ny orinasa fanofana mpanazatra, minibus, minibus ary taxi service, Towers bus manolotra a manadino sy manokan-tena; araka izay tian'ny mpanjifany.
Ny fiaran-dry zareo tsirairay dia tonga lafatra amin'ny fitsangatsanganana, lalana fizahantany, fitsidihana tanàna iray, antoko bachelor, fifindrana any amin'ny seranam-piaramanidina, ary inona no tianao hatao.
Iray amin'ireo tolotra natolotry ny raharaham-barotra is the fanompoana for 7 VIP olona, ao amin'ny minivan 7 seza Vip; Is a fiara nampiofanina Seza 7, manisa ny seza mpamily miavaka. Koa satria toy ny ao anaty fiara tsirairay dia ny fifanarahana dia amin'ny mpamily.
Manoritra ny fikarakarana minibus
Ity karazana fifindrana ity dia tsara ho an'ny mandeha lavitra eo anelanelan'ny tanàna, satria misy seza 7
Manana ahiahy momba ny hofany ve ianao?
Raha manana fanontaniana na fanontaniana momba ny karazana fiara tianao hofanina ianao dia aza misalasala miantso antsika amin'ny alàlan'ny fanindriana ny sarimihetsika finday.
Tolo-kevitry ny budget
Mangataha ny teti-bola tsy misy fanoloran-tena Rentrée de minivan 7 seza vip in madrid. Budget, amin'ny fipihana ny sary
Mivarotra tranokala 7 vip Madrid
Este fanompoana Tena tsara ho an'ny vondron'olona vitsivitsy izay maniry ny hitsidika azy tsy hanana fahafahana handehanana vip class.
Ity fiara ity, a 7 minivan Vip seza avy any an-trano Mercedes, amin'ny loko mainty mainty izay manome sary saropady sy malina; Ao anatiny misy rakotra hoditra mainty sy fotsy, manome loko tena tsara sy mifangaro.
Raha misalasala ianao manakarama na tsy miaraka Towers bus, aza mieritreritra azy intsony ary mangataha ny anao teti-bola maimaimpoana maimaim-poana, izay azonao angatahana na miantso ny ora an-telefaona amin'ny orinasa 24 + 34 607 372 252 na azonao atao izany amin'ny alàlan'ny mailaka info@torresbus.es ; Raha manapa-kevitra ny hampiasa ity fomba farany ity ianao dia tsy maintsy manondro ireto fizarana manaraka ireto:
Inona ny angon-dàlana tokony homeko ny orinasa mba hikarakarana ny tranokala minivan 7 seza any Madrid?
- Andro fialan-tsasatra sy fiverenana; - Fotoanan'ny fialana sy fiverenana; - ny toerana misy ny toerana fialana sy toerana; dia asongadino fa ny hetsika dia hatao any amin'ny toerana misy azy 7 minivan Vip seza fa raha tsy izany, dia ho entina miverina ihany izy; -Ny olona (max 7 handeha amin'ny 7 minivan Vip seza ) ary raha toa ianao hitondra entana na tsia; - nomeraon-telefaona, anaran'olona ary ny anaran'ny olona nangataka ny antsipiriany amin'ny fifandraisana amin'ny mailaka na amin'ny mailaka na antso an-telefaona.
Ny orinasa dia ao amin'ny faritra Madrid, Getafe ary any Toledo no birao.
Ahoana ny fomba hametrahana ny famandrihana ny famandrihana ny fanofanana vanona 7 vip ao Madrid?
Raha vantany vao mandray ny hafatry ny dokambarotra iray ianao izay manonitra ny vidiny aminao mba hahatonga ny dia / fitsangatsanganana ao aminay Vip minivan, raha manaiky ny habetsaky ny vola azonao anaovana ny fandoavam-bola amin'ny fomba samihafa:
- Fomba voalohany handoavam-bola 40% amin'ny totalin'ny vola amin'ny alalan'ny famindrana banky ary ny sisa 60% amin'ny fotoana hahatongavan'ny mpamily ary alohan'ny hanatanterahana izany fanompoana.
- Ny tanjona faharoa dia ny handoa vola 60% amin'ny alalan'ny famindrana banky sy ny sisa 40% amin'ny fandefasana ny mpamily.
- Ny safidy fahatelo dia ny manefa ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny famindrana banky.
Ny kaonty amin'ny banky dia miditra amin'ny mailaka iray izay ho azonao miaraka amin'ny sandan'ny vola fanompoana.
Aza misalasala ary mangataha fampahalalam-baovao mba hanolorana anay fanompoana de 7 minivan Vip seza.
Sarin'ny mpamily Jose Julio Quintas miaraka amin'ny antsika 7 minivan Vip seza
Trano fivarotana 7 VIP minivan - LUJO Madrid Febroary 23rd, 2017Fampiofanana mpampiofana